‘शंका’ मा रहँदै राजदूत !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ८, २०७७ सन्जु पौडेल
तिलोत्तमा — रुपन्देहीको बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बिहीबार बिहान दुई संक्रमितको मृत्यु भएको छ । उनीहरू पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुका हुन् ।
स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि भदौ २७ गते बुटवल ल्याइएका पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम–३ का ४९ वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएसँगै कोरोना विशेष अस्पतालमा राखी उपचार भइरहेको थियो । असोज २ बाट भेन्टिलेटरमा राखिएका उनको बिहीबार बिहान ४ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले बताए । अस्पतालका अनुसार ती व्यक्तिलाई कलेजोसम्बन्धी समस्या थियो ।
त्यस्तै असोज १ गते अस्पताल ल्याइएका कपिलवस्तुको बुद्धभूमि–६ का ५० वर्षीय पुरुषको बिहीबार बिहान ७ बजे मृत्यु भएको डा. थापाले जानकारी दिए । उनलाई २ गतेदेखि नै भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गरिँदै थियो । अस्पतालका अनुसार उनी मधुमेहका बिरामी थिए । यससँगै उक्त अस्पतालमा मृत्यु हुनेको संख्या १७ पुगेको छ । अहिले अस्पतालको आईसीयूमा १४ संक्रमित उपचाररत छन् ।
प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०८:५८